Maxkamada CQS ayaa ka bilaabatay dhageysiga dacwad dil ah oo loo heysto askari Boolis… – Hagaag.com
Maxkamada CQS ayaa ka bilaabatay dhageysiga dacwad dil ah oo loo heysto askari Boolis…
Posted on 29 Juunyo 2020 by Admin in National // 0 Comments
Maxkamada darajada koobaad ee Ciidamada Qalabka Sida ayaa maanta waxaa ka bilowday dhagesysiga dacwado dil ah oo loo heysto askari katirsanaa Ciidanka Booliiska oo bishii Ramadaan labo qof oo shacab ah ku dilay degmada Boondheere.
Dable Boolis Xasan Aadan Xasan ayaa loo heystaa dil 1-dii bisha Ramadaan uu u geystay Xasan Cali Cadaawe iyo Madiino Cabdullaahi Cabdi, dilkan ayaana magaalada Muqdisho ka abuuray caro sababtay in shacabka dhigaan banaan baxyo rabshado watay.
Xeer ilaaliyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida Cabdullaahi Buulle Kameey ayaa sheegay in askariga uu geystay dil bareer ah , waxa uuna weydiistay Garsoorayaasha Maxkamadda in lagu xukumo ciqaab u dhiganta dambiga uu galay.
Qareenada u doodayay askariga gacan ku dhiiglaha ayaa sheegay in dilka askariga geystay uusan aheyn bareer, waxa ayna codsadeen in Wasaarada Amniga iyo Taliska Booliiska bixiyaan magta dadka uu dilay askarigan.
Guddoomiyaha Maxkamadda Darajada 1aad ee Ciidamaa Qalabka Sida ayaa sheegay in uu xiran yahay dhageysiga kiiskan dacwada dilka ah, waxa uuna sheegay in dib kasoo sheegi donaan go’aanka Maxkmada .